वैशाख महिनातिर नेपाली फुटबल मैदान बाहिर गर्मिने गर्छ, किनभने यो नै त्यो समय हो, जति बेला खेलाडीले प्राय: क्लबसँग नयाँ अनुबन्ध गर्छ । गत वर्ष मच्छिन्द्रले मनाङ मस्र्याङ्दी र थ्री स्टारका ठूला नामका खेलाडीलाई भित्र्याएर चर्चा बटुलेको थियो र यसै अनुसार उसले सहिद स्मारक लिग ‘ए’ डिभिजन पनि जितेको थियो । यसपल्ट सबैको आँखा यही मच्छिन्द्र क्लबमा थियो र प्रश्न थियो, यसपल्ट पनि क्लबले यस्तै नामी खेलाडी को–को भित्र्याउँछ भनेर ।
तर, अवस्था यस्तो बन्दै बनेन । अहिले कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीका कारण पूरा देशमा लकडाउन चलिरहेको छ र नेपाली फुटबल गतिविधी शून्यको स्थितिमा छ । यस्तोमा क्लबले खेलाडी अनुबन्ध गर्ने कुरा पनि भएन । स्थिति खेलाडी अनुबन्धमै मात्र पनि सीमित छैन, कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीले नेपाली फुटबललाई कत्तिको असर पार्नेछ, त्यो हेर्न बाँकी छ । तय छ, सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने खेल पनि यही फुटबल नै हो ।
अझ सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने त खेलाडी नै हुन् । डर छ कतै छ वर्ष अगाडि आएको भूकम्पपछि जुन नाजुक स्थिति नेपाली फुटबलमा रहेको थियो, त्यही फेरि दोहोरिएर आउने त होइन ? नेपाली घरेलु फुटबलमा सर्वाधिक सफल क्लब मनाङ मस्र्याङ्दीले भनिसकेको छ, अनुबन्धअनुसार खेलाडीको पूरा तलब दिने छैन । क्लबको तर्क हो, लकडाउनले फुटबल नभएपछि क्लबको आम्दानी पनि सुकेको छ, त्यसैले खेलाडीलाई पूरा तलब दिन सकिने छैन ।
दशरथ रंगशाला र अन्य खेलकुदका भौतिक पूर्वाधारमा ०७२ को भूकम्पले क्षति पुगेको थियो । त्यसै कारण पनि चार वर्ष लिग फुटबल हुन सकेन । फुटबलमा सबैभन्दा ठूलो लिग नै हो, नकआउट प्रतियोगिताको खासै अर्थ हुँदैन । लिगकै कारण पनि खेलाडीले क्लबमा अवसर पाउने हो । भूकम्पले गर्दा चार वर्ष लिग हुन नसके जस्तै कतै अबको केही वर्ष लिग हुन सकेन भने के हुने होला त ? खेलाडीमा स्वाभाविक ढंगले चिन्ता छाएको छ ।
यसअघि लिग नहुँदाको स्थितिमा कतिपय खेलाडी बेरोजगार भए, कतिपय विदेश पलायन भए । दुई वर्षमात्र भयो, लिग फुटबल फेरि सुरु भएको । सुरुको वर्षमा रेलिगेसन बिना नै लिग भएको थियो भने त्यसको अर्को वर्ष खालि एकै टिम मात्र रेलिगेसनमा परेको थियो । यसलाई लिएर ब्यापक आलोचना पनि भयो, तर मन बुझाउने एउटै तथ्य मात्र के थियो भने कम्तीमा फेरि लिग त सुरु भएको छ । अब मन थाम्न के तथ्यमा गाह्रो भएको छ भने अब फेरि लिगको लय खलबलिएको छ ।
त्यसो त अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पाले नेपाली मिडियासँगको कुराकानीमा नेपाली फुटबल भूकम्पमा जस्तो लामो समयका लागि प्रभावित नहुने दाबी गरेका छन् । उनकै पनि तर्क छ, कम्तीमा फुटबल तालिका र आर्थिक अवस्था भने प्रभावित हुनेछ । भूकम्पका बेला त एक प्रकारले नेपाल मात्रै प्रभावित भएको थियो । तर, यसपल्टको महामारीको प्रभाव त पूरा विश्वलाई छ, त्यसैले नचिताएको हिसाबले नेपाली फुटबललाई धक्का पुग्ने डर पनि छ ।
अब के हुने हो त ? एन्फाका प्रवक्ता किरण राई पनि मान्छन्, यस्तै हुनेछ भनेर भन्न सकिन्न । उनी भन्छन्, ‘हामी कसैले पनि अब यस्तै हुनेछ भनेर भन्न सकिरहेको स्थिति छैन । लकडाउन खुलेर स्थिति सामान्य भएपछि हामी बैठक गर्नेछौं र त्यसपछि के गर्ने हो भनेर ठोस छलफल गर्नेछौं । त्यसपछि मात्र वर्ष ०७७ को नेपाली फुटबल कार्यक्रम के हुनेछ भनेर भन्न सक्छौं । अहिलेको विषम परिस्थितिमा यस्तै भन्न गाह्रो छ ।’
उनी पनि मान्छन्, यो स्थितिको सबैभन्दा बढी मार पर्ने भनेकै खेलाडीलाई हो, अनि नेपाली फुटबललाई नै आफ्नो करियर बनाएर बसेकालाई । अधिकांश खेलाडीले पनि भनिसकेका छन्, डर छ, भूकम्पपछि कै स्थिति नेपाली फुटबलमा आउन सक्छ । त्यसैले यही बेला हो, एन्फाले केही न केही गर्ने । प्रवक्ता राई पनि खेलाडी र अन्य सरोकार क्षेत्रलाई आर्थिक सहयोगका रूपमा कुनै न कुनै रूपमा सहयोग गर्नुपर्ने ठान्छन् । तर, यसका लागि निर्णय गर्न पनि समय त चाहियो नै ।
हामीसँग ठ्याक्कै तथ्यांक त छैन, तर अनुमान के गरिन्छ भने नेपाली फुटबलसँग कुनै न कुनै रूपमा जोडिएका दसौं हजार छन्, यसमा खेलाडीदेखि प्रशिक्षक, रेफ्री, खेल पदाधिकारीसमेत छन् । ‘ए’ डिभिजनका विभागीय टिम छाडेर एक दर्जन क्लबले हजारको हाराहारीमा खेलाडीलाई अनुबन्ध गर्ने गर्छ । त्यति मात्र होइन, बी र सी डिभिजनका क्लबले पनि रामै्र रकम दिएर खेलाडी अनुबन्ध गर्ने गर्छन् । अहिले तत्कालका लागि यो सम्भावना कमजोर बनेको छ ।
क्लब पनि एन्फाले कस्तो कार्यक्रम ल्याउनेछ भनेर कुरिरहेका छन् र त्यसैअनुसार मात्र आफ्नो पनि कार्यक्रम तय गर्ने योजना बनाइरहेका छन् । मच्छिन्द्र क्लबले पछिल्लो समय ‘ए’ डिभिजन जित्दा पर्दा पछाडिबाट सबैभन्दा बढी भूमिका खेल्ने खास खेलाडी थिए, अनिल श्रेष्ठ । उनी पनि मान्छन्, ठोस कार्यक्रम विना खेलाडीलाई अनुबन्ध गर्ने स्थिति नै छैन । फेरि क्लबलाई अबको दिनमा प्रायोजक खोज्न पनि उत्तिकै गाह्रो छ, किनभने लकडाउनको प्रभाव यी प्रायोजकमा पनि उत्तिकै छ ।
फुटबलमा सबैभन्दा बढी महत्त्व लिगकै हुन्छ, तर नेपाल जस्तो देशमा नकआउट प्रतियोगिताको पनि उत्तिकै भूमिका छ । भूकम्पपछि नेपाली फुटबललाई जीवन्त राख्न सबैभन्दा बढी भूमिका यिनै नकआउट प्रतियोगिताले गरेको थियो, त्यसमा पनि सबैभन्दा निर्णायक रहेको थियो, मोफसलमा हुने प्रतियोगिताको । तय छ, अबका केही समय यिनै प्रतियोगिताको आयोजनामा पनि समस्या हुन सक्छ । र, यसको प्रभाव पर्ने समग्रमा नेपाली फुटबललाई नै हो ।